ओलीकाे बुबाप्रति बेवास्ताः छोरा केकमा मस्त, बुबा गेटमा अलपत्र ! सेक्यूरिटीले चिनेनान् (भिडियो सहित)
फागुन ११, काठमाडौँ ।
आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ६७ औं बर्थ डे । हिजो राती नै बालकोटस्थित घरमा केक काटेर जन्मदिन मनाएका ओलीले आज बिहान बालुवाटारमा अर्काे केक काटेर बर्थ डे मनाएका छन् । शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगतै ओलीले आफ्नो बर्थ डे केक काटेका हुन् । ओलीको बर्थ डे केक खान भारतीय राजदूत, चिनिया राजदूतदेखि एमाले नेता कार्यकर्ताहरुको भिड देखिन्थ्यो ।
यसरी बालुवाटार भित्र ओलीले केक काटीरहँदा उनका बुवा मोहनप्रशाद ओली भने गेटमै अलपत्र परेका थिए । त्यहाँ खटिएका सेक्यूरिटीले समेत उनलाई प्रधानमन्त्रीका पिता भनेर नचिन्दा उनी गेटमै अन्य सर्वसाधारण नागरिक जस्तै पालो कुरेर बसेका थिए ।
करिब सवा ९ बजे बालुवाटार प्रवेश गरेका मोहन प्रशादले केही समय प्रतिक्षालयमै विताए । त्यही समयमा केहीले उनको अन्तर्वाता लिन समेत भ्याए । सञ्चारकर्मीहरुलाई भित्र प्रवेश दिइयो त्यही मौकामा उनी पनि भित्र गए ।
ओलीले केक काट्ने बेलासम्म उनका पितालाई भित्र प्रवेश गर्न दिइएको थिइन् । प्रधानमन्त्री पत्नीलाई सुरक्षा सहित केक काट्ने ठाउँमा लगियो त्यतीबेलासम्म पनि उनका पिता अलपत्र अवस्थामै थिए । जन्मदिनको केक काटि सक्दा समेत उनका पिताले भित्र प्रवेश पाएनन् ।
तीन दिन अघि मात्रै झापाबाट छोराको जन्मदिनका लागि काठमाडौं आएका पिता यसरी निवासबाहिरै अलपत्र पर्नुमा दोष कसको ? केन्द्र बिन्दु बाट
प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुन ११ गते शुक्रवार
चीनकाे अस्पतालमा पुगेपछि वर्षमान पुनले थाहा पाएकाे त्याे के कुरा हाे ?
मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीकाे देवरकाण्डकाे वास्तविकता के हाे ?
प्रदेश २ काे नाम र राजधानीकाे टुंगाे लाग्याे